Sammubani, Author at Ibsaa Jireenyaa - Page 3 of 79
October 31, 2021 Sammubani Leave a comment
Sagaagalumatti Kufuu wayyaa moo Hidhamuu Wayyaa?
Niitin Aziiz Yuusufin wal-qunnamuuf garmalee barbaadde. Dubartoota fuunduratti yoo inni fedhii ishii kana hin guutiniif, akka adabbii cimaa adabamu itti dhaadatte. Yommuu Yuusuf (aleyh salaam) dhaadhanna (zaacha) kana dhagahuu fi dubartoonni ishii qeeqaa turan gaafi ishiitiif deebii akka deebisuuf isa jajjabeessan argu, gara Gooftaa isaatti qajeeluun akkana jechuun kadhate:
October 27, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaalee darban keessatti sababoota Islaama erga qabatanii booda duubatti akka deebi’an nama taasisan ilaalle turre. Amma immoo kanumaan wal-qabatee seenaalee muraasa ni ilaalla.
October 17, 2021 Sammubani Leave a comment
Oduun Magaalatti Keessa Babal’achuu fi Jaalalli Qalbii ishii gubuu
Suurah Yuusuf irraa taatee haati manaa ministeera Ijipt badiitti isa affeeru ilaalle turre. Dubartiin tuni sababa bareedinna Yuusufitiin garmalee isa jaallatte. Badiitti isa affeeruuf carraaqxe. Garuu inni didee irraa dheesse. Dubartoonni magalaatti keessa jiraatan oduu kana yommuu dhagahan, hafarsuu eegalan:
October 13, 2021 Sammubani 2 comments
Sababoota Islaama erga qabatanii booda duubatti akka deebi’an nama taasisan osoo ilaallu kunoo xumura irra geenye. Sababoota lama ilaalun boqonnaa kana ni xumurra.
Dargagoota keessaa baay’een isaanii shamarran gaggaarii fuudhuuf fedhii guddaa qabu. Shakkii hin qabu kuni hojii gaarii ta’eedha. Ergasii dargaggeessi kuni ni fuudha. Dubbiin “Ebalu dubartii gaarii fuudhe, ebalu dubartii taqwaa qabdu fuudhe, ebalu dubartii wiyxataa fi kamsaa soomtu fuudhe” jedhu namoota jidduu deddeebi’a. Garuu wanti ta’e dargaggeessi kuni haala isaa irraa homaa hin jijjirre. Inumaa shamarreetu haala ishii jijjire, shamarri tuni gaarii akka taatetti hin lakkaawamtu. Warri ishii haala abbaa manaa ishii dursa hin hubanne. Iccitiin maalidhaa?